Ny ratra fanorana voalaza fa mitentina 300,430 dolara Atlantika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny ratra fanorana voalaza fa mitentina 300,430 dolara Atlantika
LONDON, Angletera - Mpitsabo mpanotra virtoaly Atlantika roa no nahazo tombony GBP300,000 noho ny fahasimbana nateraky ny ratram-po naratra vokatry ny fanorana natao tany
LONDON, Angletera - Mpitsabo mpanotra virtoaly Atlantika roa no nahazo karama GBP300,000 noho ny fahasimbana nateraky ny fery naratra vokatry ny fanorana natao tao amin'ny efitranon'ny kilasy voalohany London Heathrow.
Notaterin'ny AFP fa nilaza i Jayne Evans sy i Michelle Hindmarch fa nanaintaina ny tanany, ny sorony ary ny lamosin'izy ireo rehefa avy nanome fitsaboana Shiatsu lava an'ireo mpandeha ao amin'ny Clubhouse Lounge ao amin'ny Terminal 3 Heathrow.
Ny ankamaroan'ny mpanjifan'izy ireo dia lehilahy izay nitafy akanjo foana ary nitaky fanerena ny tanana sy ny rantsan-tanana mavesatra noho ny fanorana ho an'ny vehivavy, hoy ny Fitsarana Avo tao Londres.
Nilaza izy mivady fa tsy maintsy mahafoy ny asany, izay efa nampiofanin'izy ireo hatramin'ny nialany tany an-tsekoly, noho ny fihenjanana, ary handray asa hafa.
Araka ny voalazan'ny AFP, nilaza tamin'ny fitsarana ireo vehivavy fa nitolona tamin'ny fanaovana raharaha an-trano tsotra izao izy ireo, anisan'izany ny "fanesorana ny alahady natsatsika avy tao anaty lafaoro".
Nanaiky ny tompon'andraikitra ny Virgin Atlantic Airways Ltd saingy niady hevitra ny amin'ny habetsaky ny tambin-karama sy ny hamafin'ny ratran'izy ireo.
Evans, 40 taona, avy any Ruislip, Middlesex, dia notolorana vola 230,972 £ ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny mpitsara Martin McKenna dia nanamarika fa manana asa mpitondra fivavahana tsy dia be karama intsony izy izao ao amin'ny fizarana entana.
Hindmarch, 32 taona, avy any Banstead, Surrey, izay nahita asa be karama kokoa tamin'ny sehatra hafa, dia nahazo ny vola kely 69,458 XNUMX £.
Nilaza ny mpitsara fa "vehivavy tapa-kevitra sy be herim-po izy izay nanararaotra tsara ny toe-javatra nisy azy" ary nandà ny sosokevitra iray fa nanitatra ny soritr'aretina izy.